धार्मिक Archives - S Khabar
पौष २५ गते शुक्रबार देखि श्रीस्वस्थानी ब्रत आरम्भ: यस्ता छन् धार्मिक…
वास्तुशास्त्र– पति पत्नीबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन राख्नुहोस् कोठामा…
यी बार गर्नुहोस् नयाँ कामको सुरुवात ! कमाउनु हुनेछ सोचेभन्दा बढी धन
व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशी ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको जन्म बार हेरेर नै व्यक्तिको कुण्डली निर्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मेको बार र राशीले नै ब्यक्तिको भविष्य बारे बताउने गर्छन् । ज्योतिष शास्त्र अनुसार जो कसैले व्यापार…
वास्तुशास्त्रमा बताइएका कुरामाथि ध्यान दिने हो भने घरमा सुख र शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ । वास्तुशास्त्र अनुसार घर सफा गर्दा पानीमा अलिकति नून हाल्नुस् । यसो गर्दा घरमा सकारात्मक ऊर्जा छाउँछ । यस्तो ऊर्जा भएको घरमा कहिल्यै धनको…
आज मंगलबार भगवान गणेशको दर्शन आराधना गर्नाले सबै कार्य शिद्धि हुने शास्त्रीय मान्यता छ। बक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा । निर्विघ्नं कुरू मे देव सर्व – कार्येशु सर्वदा ।। करोडौं सूर्यको जस्तो तेज भएका भगवान गणेश देवलाई आराधना…
हिन्दू धर्म शास्त्र र विशेष गरि वास्तु शास्त्रमा शुभ र अशुभ कुराहरुको संकेतबारे व्याख्या गरिएको पाउन सकिन्छ । जीवनमा घट्न विभिन्न घटनाक्रमहरुबाट विभिन्न संकेतबाट शुभ हँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यस्ता संकेतले भविष्यमा हुने…
सुत्नु अघि भाग्यमानीलेमात्र देख्ने यो दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंखलाई बेवास्ता नगरी दर्शन स्वरूप ॐ लेखि…
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ।जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने…
शास्त्र भन्छ दिनभरी हुने सुख शान्तिको सम्बन्ध रातसँग हुन्छ। रातीमा राम्रो निद्रा परेन भने शरीरको थकान मेटिँदैन। तपाइँलाई ताजा अनुभव रातभरीको विश्राम पछि मात्र हुन्छ। दिनभरीको सुख शान्तिका लागि यी ५ चीज सुत्ने समयमा सिरानी मुनी राख्नु राम्रो…
धन सम्पतीको जोहो गर्न र यसको बचत गर्न अनेकौं प्रयासका बावजुद सफल भइरहनु भएको छैन ? वा तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी अनेकौ समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लक्ष्मीको कृपा भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । लक्ष्मी प्रसन्न भए वा दाहिना भएमा…
भारत- सामान्यतयाः मन्दिरमा पुगेका भक्तजनलाई मुल पुजारीले फूलपाती र अक्षता प्रसादका रुपमा दिने गर्छन् । मन्दिरमा पुग्ने सबैले अरुको प्रसादका लागि मन्दिरबाट ल्याउने भनेको फूलपाती र अक्षेता नै हो । तर कुनै मन्दिरमा प्रसादका रुपमा सुन…
कुनै पनि घर परिवारले सुख, शान्तिको मनोकांक्षा राखेका हुन्छन् । तर सबैको घरमा त्यस किसिमको वातावरण सिर्जना भएको हुँदैन । यसो हुनुमा त्यस्तो घरमा नकारात्मक उर्जाको प्रभाव रहेको शास्त्रिय मान्यता छ । सकारात्मक उर्जा ल्याउन निकै कष्ट गर्नु…
कुन राशिका मानिसले के मन्त्र जप्दा हुन्छ धन प्राप्ति ?
हरेक व्यक्तिले सुखी जीवनका लागि धन प्राप्ति गर्न मेहनत गरिरहेको हुन्छ । अहिलेको समयमा त धन अर्थात पैसा एक आधारभूत आवश्यकता नै बनिसकेको छ । त्यसैले हिन्दी भाषामा एक भनाइ पनि छ – ‘बाप बडा ना भैया, सबसे बडा रुपैयाँ !’ तपाईंको गोजीमा पैसा…